२०७९ असार ९ बिहीबार १२:२६:००
भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि रु. ६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट रु. चार अर्ब ८५ करोड थियो। एक अर्बभन्दा बढी बजेट आउँदो वर्षका लागि थप गर्न लागिएको हो। यही असार १० गते शुक्रबार भरतपुरको नगर परिषद् हुँदै छ।
महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ। उनले भने, ‘हामी रु. ६ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।’ बजेटपूर्व महानगरपालिकाले संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो। छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ट अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिइएको बताइन्। गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको उनले जानकारी दिइन्। महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ। खाल्डाखुल्डी सडकलाई मर्मतसम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिन लागिएको छ।
बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको छ। महानगरभित्रका सबै टोल सुधार समितिहरूलाई टोल सुरक्षा, जनसंख्याको अभिलेख, सडक हरियाली, सडकबत्ती, फोहर संकलन र रु. एक लाखबराबरको टोल सुधार तथा विविध मर्मत कार्यक्रमहरूको कार्यविधि बनाई टोल सुधार समितिहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ।
उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आम्दानी बढोत्तरी गर्न कर शिक्षा, कर सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गरी करको दायरामा ल्याउन लागिएको बताए। सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु. एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव रु. एक अर्ब ५० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताए।
संघ र प्रदेशको ससर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिए। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले संघ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। महानगरकै पहलमा संघ र प्रदेशबाट विभिन्न आयोजनामा बजेट परेका छन् । नारायणी नदी तटबन्ध, सिटीहल निर्माण, पुलचोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक निर्माण, चक्रपथ निर्माणजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुन लागेको छ।
संघ र प्रदेश सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। महानगरपालिकाभित्र शिक्षक अस्पताल बन्दै छ। भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ भने मेघौली विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिँदै छ। नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल तथा पश्चिम चितवन र नवलपरासी जोड्ने विभिन्न पुलहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ। महानगरको आन्तरिक बजेट कम भए पनि संघ र प्रदेशको ठूलो रकम यहाँका आयोजनामा परेका छन्। यसका कारण महानगरपालिकाले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेको छ। रासस